Momba anay - Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd.
Hangzhou Mingjue Technology Co., Ltd. dia orinasa fampiroboroboana indostria sy varotra natsangana tamin'ny taona 2016. Miara-miasa amin'ny orinasa ambony telo izahay mba hanomezana vokatra avo lenta ho an'izao tontolo izao. Hatramin'ny nananganana ny orinasa dia niasa mafy izahay mba ho lasa mpitarika amin'ny indostrian'ny sokitra, fanapahana ary marika. Mpanavao isika. Mpanapaha olana isika. Manolo-tena izahay amin'ny famolavolana sy hanome ny rafitra laser avo lenta indrindra manerantany.
Hangzhou Mingjue Technology CO., LTD dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny laser laser sokitra sy ny milina fanapahana, milina laser galvanometra, milina fanapahana laser fibre ary milina fanamarihana laser. Ny maodelin'ny vokatra dia maodely maherin'ny 100.
Ny fampiharana dia misy fanontana nomerika, lamba, akanjo, kiraro hoditra, lamba indostrialy, fanaka, doka, fanontana sy famonosana marika, elektronika, fanaka, haingon-trano, fanodinana vy ary indostria maro hafa. Vokatra sy haitao maromaro no nahazo ny patanty nasionaly sy ny zon'ny mpamorona lozisialy, ary nankatoavin'ny CE sy ny FDA.
1. Serivisy matihanina mandritra ny fizotran'ny filaminana, 24 ora hijoroana ho an'ireo fanontanianao.
2.Fanaparitahana vokatra feno
Tsy mila manasokajy orinasa maro ianao hahafantaranao ireo karazana vokatra tadiavinao, ary avy eo manontany olona samihafa amin'ny orinasa samihafa. Afaka mahita ny zava-drehetra eto ianao ary mifandraisa olona iray fotsiny mba hahazoana izay tadiavinao.
3.Fomba fizahana kalitao henjana, taham-pitsapana 100% alohan'ny fandefasana azy.
4.Mihoatra ny 12 taona ny traikefa eo amin'ny indostrian'ny varotra iraisam-pirenena, manomeza hevitra momba anao tsy ho an'ny vokatra ihany fa koa amin'ny fizotran'ny filaminana rehetra manomboka amin'ny A ka hatramin'ny Z, toy ny raharaham-panjakana, ny fandefasana, ny resaka hetra sns.
1. Ny faritra masinina vita amin'ny milina CNC azo antoka ho mateza
2. Birao fanaraha-maso nohavaozina ho an'ny fanitsiana vola marina kokoa
3. Mpankafy setroka mahery vaika amin'ny setroka sy setroka
4. Port USB hampifandray ny sokitra
5. Windows 8, 7 (64 na 32 bit), XP, 2000 mifanentana (TSY mifanaraka amin'ny rafitra iOS)
6. Voamarina ny FDA
Avelao ho fanta-daza eran'izao tontolo izao ny vita vita sinoa.
Ataovy mora kokoa ny mpiara-miasa aminay.